10 aaladood oo lagu abuuro jees jees aan lagu seegi karin | Abuurista khadka tooska ah
10 qalab oo muhiim u ah abuurista jees jees
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka
hay siyaabo kala duwan oo loo helo qalab cusub Taas oo lagu hagaajinayo geeddi-socodka abuuritaanka nooc ku-habboon, marka laga reebo xaqiiqda ah in qof kastaa uusan awoodin inuu sawirro mashruuc si ugu dambeyn loo siiyo qaabka la qeexay.
Tan awgeed waxaa jira qalab kala duwan oo loogu talagalay abuuro majaajillo iyo silsilado sida 10-ka ee aad hoos ka heli doontid taasi waxay kaa caawin doontaa inaad si dhakhso leh u qaabeyso una tijaabiso mashruucaaga cusub.
3 Barnaamijka yaabka leh
10 Waxaan weydiinayaa
Waa a qalabka ugu muhiimsan si aad u abuurto silsiladaha silsiladahaaga iyo jeesjeeskaaga. Way fududahay oo way fududahay in la isticmaalo jeesjees wanaagsan oo loo diyaariyey si ka dhakhso badan sidii qofku u malayn lahaa marka hore. Haddii aan loo baahnayn isdhexgal nooc ah waa xulashada ugu fiican.
Waxaa lagu gartaa interface ah wuxuu ku shaqeeyaa jiidista iyo daadinta walxaha si loo abuuro jeesjees. Waad la wadaagi kartaa mashruuca dadka kale waqti yarna waad kaga gudbi kartaa inaad mashruuc deg deg ah u yeelato midka noqon lahaa alaabada ugu dambeysa.
Barnaamijka yaabka leh
Mid ka mid ah wanaaggeeda ayaa ah marin u helka barnaamijyada kala duwan sida PC, mobilada ama webka. Waxay la midoobaysaa DropBox waxayna bixisaa marin u helida dhammaan kooxaha. Nooc kale oo ka mid ah astaamaheeda gaarka ah ayaa ah in noocyada noocyadiisa kala duwan loo dhoofin karo sidii haddii ay ahaan lahaayeen .apk horumariyeyaasha Android.
Moqups waa dhakhso oo fudud sida Balsamiq oo kale. Xaqiiqda ah inay tahay hoosta HTML5 waxay ka dhigeysaa qalab deg deg ah Oo fudud. Waa in la ogaadaa in tirada xubnaha mashruuca aan xad lahayn.
Una qalab weyn oo leh tan oo xulashooyin loogu talagalay silig sameynta oo ay ka mid tahay suurtagalnimada in loo beddelo sawir sawir gacmeed dijitaal ah. Kaliya ma ahan qaadashada shaashadda waana intaas, laakiin waxay ku lug leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu beddelatid sawir dijitaal ah. Runtii maahan qalab raqiis ah laakiin waa caawimaad weyn.
Akhlaaqda wanaagsan ee Protoshare waa kartidooda shaqo. Qalab xirfadeed oo kuu oggolaanaya inaad kala hadasho dhammaan mashruucyada waqtiga dhabta ah wada-hawlgalayaasha. Iyada oo tiro badan oo ikhtiyaarro ah oo ay tahay aalad aad u cad is-dhexgalka, waxay u dhowdahay mid ka mid ah inay tahay inuu isku dayo.
Websaydhka proto.io wuxuu leeyahay a naqshad aad u fudud oo tani waa qiimaha weyn. Qalab qiimo weyn oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee macruufka, Android iyo Windows Phone.
Qalabka ugu fiican pKuwa aan dooneynin inay dhib badan soo gaaraan markay sawir ka qaadayaan warqad una wareejinayaan dijitaal. Xulo mid ka mid ah qaababka oo isticmaal qaar ka mid ah cunsurrada si aad u abuurto jees jees fudud oo loogu talagalay macruufka.
Daahiri waxay bixisaa qoraal u rogaya degel silig silig. Waa waxtar weyn marka aad naftaada u hesho degel soo jiita dareenkaaga oo doonaya inuu u adeegsado aasaas ahaan mashruucaaga cusub.
Waxaad u isticmaali kartaa qalabkan inaad tijaabi noocyada adoo u diraya xiriiriye isticmaalayaasha oo markaa bilaabaan inay ka qaataan xogta iyaga.
Hadana hadaad rabto jees jees diyaar ah, ha moogaan xulkeenna Jees jees jees iyo nooc kale oo baakad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 10 qalab oo muhiim u ah abuurista jees jees
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, wax badan ayey i caawisay!
Aad u faa'iido badan. Mahadsanid
Way fiicnaan lahayd haddii ay mid kasta sharraxaan, taas oo ah, inay siiyeen macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qalabkan, sida loo isticmaalo iyo sababta loo isticmaalo.
U jawaab Maryolis